MPEG-4 iyo MP4 waa labada la eego in ay yihiin wax badan expeced in lagu khaldo midba midka kale, ma ahan oo keliya ay ku kala duwan yihiin warqad by laakiin sidoo kale sababta oo ah xaqiiqada ah in ay si dhow ula badan ku dhex ee files warbaahinta sida filimada iyo music, sababtoo ah. Farqiga ugu muhiimsan ee u dhexeeya MPEG4 iyo MP4 waa shaqadooda. MPEG4 waa hab isku geynta video Deji ah oo qeexayaa riixo ee maqal iyo muuqaal ah xogta digital (AV). Taasi waa dhab ahaan mas'uul ka ah sida sawirada waxaa lagu tilmaantay Tifaftirayaasha BBC iyo beddelay xogta. MPEG 4-waxaa loo isticmaali karaa riixo xogta AV for web, warbaahinta hoorto, CD-qaybinta, iyo sidoo kale codsiyada television warbaahinta codka. MP4 waa uun weel warbaahinta in loo soo sameeyay si uu u qabto xogta la encoded by MPEG4 ah. Taas macnaheedu waa in waxa loo isticmaali karaa in ay ku kaydiso subtitles audio iyo / ama video, cutubyada, iyo macluumaad la xidhiidha.
Qeybta 1: MPEG4 vs MP4, Faraqa u dhexeeya MPEG4 iyo MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo MPEG4
MP4 (MPEG-4 Qaybta 14)
Developer MPEG-4 waxaa sameeyay Guuritaanka Picture Khubarada Group (MPEG), hoos shaqeeya jihada wadajir ah Heerarka Ururka Caalamiga ah (ISO) iyo Korontada-Technical Caalamiga ah Commission (IEC). Kooxdani waxa ay ku shaqaysaa heerarka ee sireed dhaqaaqo sawirro iyo cod ah oo la xidhiidha. File MP4 ee ay simayo hay'adda Muhaajiriinta Caalamiga ah (ISO) si fiican u dhacaan ku dhawaad ​​nooc kasta oo ciyaaryahan warbaahinta iyo qalabka. Maxaa yeelay, waxaa la soo saaray MP4 warbaahinta MPEG4 encoded, waxa kale oo laga heli karaa gudaha MPEG-4 faahfaahinta sida qayb ka mid ah 14 ka mid ah waxa ay MP4 ma aha qaabka weelka kaliya hoos MPEG-4 laakiin waa derivative ah oo ka mid ah guud MPEG-4 Part 12 faahfaahinta kaydinta MPEG-4 files.
Taariikhda The files film aan Tifaftirayaasha waa badan weyn ee size xitaa kombiyuutarada ma ay awoodaan inay daabacaan. Markaas farsameeya bilaabay inuu ogaado qaar ka mid ah siyaabaha ay u ordaan video walax in warbaahinta digital ku meel lagu badbaadiyo iyo in la sameeyo geeyo ee internetka ay macquul tahay oo macquul ah, dhab ahaan. Sidaa darteed saarayaasha qaar ka mid ah horumariyo software in loo ogol yahay nidaamka ku cadaadisaa film si kombiyuutarka awoodin howlgalka. Waxaa jira habab badan oo loo isticmaalo geynta ee riixo, laakiin MPEG-4 waxaa si balaadhan looga hadda maalmood loo isticmaalo. MPEG-4 ayaa isku geynta la mid ah riixo in MPEG-1 iyo MPEG-2 laakiin waxaa la ballaariyey si ay u taageeraan video / audio "" diidan "", Deji hoos u yara sicirka iyo content 3D, qoraalka iyo qaar ka mid ah noocyada kale ee warbaahinta. File MP4 markii ugu horaysay la adeegsadaa 2001 sida caadiga ah ISO / IEC 14496-1: 2001, laakiin dhawr sano ka dib, waxaa la updated iyo diinta heerka ISO / IEC 14496-14: 2003. Labada qaabab MP4 iyo MOV isticmaalaan nooc ka mid ah MPEG-4 qaab sidaas daraaddeed, ay ku haboon ka shaqeeya deegaanka QuickTime. Laakiin MP4 waa ka badan oo caan ah sida marka la barbar dhigo MOV, sababtoo ah waxaa la qalo karaa iyada oo noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhufto ee nidaamka MACs Apple.
Caanka MPEG-4 ilaa furmay iman kara horumarka tiknoolijiyada ka xiiso badan mustaqbalka. Kooxda MPEG qeexayaa MPEG-4 sidii madal multimedia ah, oo loogu talagalay in ay kudhex milmaan animation, qoraalka iyo video wada galay mid ka mid qaab. Nooca wax-u janjeedha ee qaab fiican ahayn.Dhinaca inay is dhexgalka user. The formate encoded ugu caansan oo badan waa MP4 ama MPEG-4 Qaybta 14. Marka aad u daawato video ah oo internetka ama telefoonka gacanta, qalmay waa wanaagsan haddii aad isticmaalayso qaab video MP4 iyo codec H.264 ah. Waxaa jira xulasho badan marka ay timaado qaabab video. Laakiin, MP4 waa qaadista ugu sareeya labada; web iyo daawashada mobile. Sida laga soo xigtay baadhitaan, 69% ka mid ah xirfadlayaasha video isticmaali MP4 si joogto ah internetka iyo 58% u isticmaalaan mobile. Mp4 Oo weliba, yeilds natiijada ugu fiican ee size gaaban oo si weyn loo isticmaalo rippers geeyo xogta iyo Internet sida daadkii.
Durdurrada Data Geeyo Data waa kala iibsiga xogta heerka a-xawaaraha sare ee joogta ah. Sida MPEG-4 ma aha weel warbaahinta (Audio / vedio), laakiinse waa la isku Deji hab isku geynta oo soo saarta file encoded ee noocyada kala duwan. MP4 waa formate ugu badan oo si weyn loo encripted by MPEG-4. Inta badan macluumaadka gundhig ugu mp4 iyo m4v waxaa la sameeyey iyada oo durdurrada ee gaarka loo leeyahay iyo macluumaadka hoorto ee file ah in sida caadiga ah waxaa ka mid ahaa in si gooni gooni ah track oggayn. The codec kala duwan diiwaangashan diyaar u ah qaabab file kuwan waxaa lagu daabacay website-ka awood diiwaangelinta MP4. Waxaa ka mid ah codec ee loo isticmaalo iyo sidoo taageeray durdurrada xog dheeraad ah, wax yar oo ka mid ah: - Video: MPEG-4 Qaybta 10 iyo MPEG-4 Qeybta 2 - Audio: Advanced sireed Audio, oo ay la socdaan MPEG-4 Qaybta 3 walxaha audio sida sireed Audio sameecadda iyo scalable sireed sameecadda ah - Cinwaan: MPEG-4 lagu tiriyaa Text. Waxaa sidoo kale Videos DVD isticmaala subtitles in files MP4.
Metadata MPEG-4 abuuraa nooc kala duwan ee Meta-xog lagu jiro decodind warbaahinta tusaale ahaan qoraaga faylka, software loo isticmaalo in ay abuurista, iyo waqtiga iyo taariikhda kuwaas oo waxaa laga abuuray. Ayaa Meta-data sidoo kale la habaysan kartaa qaab XMP.
Files MP4 ku jiri kara Meta-data sida lagu qeexay heerka qaabka, iyo marka lagu daro, waxaa jiri kara Extensible Platform Meta-xog (XMP).
Waxaa jira nooc kala duwan ee macluumaadka oo lagu kaydin karaa metadata file mp4 ee
• Muddooyinka Video
• Shay-baarka Audio
• Interleaving AV xogta
• daa xogta
• Cutubka index
xogta • User
• metadata kala duwan farsamada: codec, waqti, version, heerka loo maqli doorbidayso, mugga loo maqli doorbidayso, muddo filim, iwm
Faa'iido • MPEG 4-waa heer, hadda hoos horumarinta gaarsiinta multimedia is-dhexgal guud ahaan shabakadaha
• Waa in ka badan codec hal iyo ka mid ah caddaymaha audio, video, iyo interactivity
• qayb Muuqaalka MPEG 4-aad la mid ah H yahay .263
• Waxaa la filaayo in gaarsiinta video heerar xogta Internet
• Mid ka mid ah hirgelinta MPEG-4 video ku jira Microsoft ee NetShow Waxaa jira faa'iido gaar ah oo isticmaalaya file MP4:
• Easy in ay isticmaalaan oo kala duwan oo ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta u jiraan in ay taageerayaan in ay codec MP4
• ilaalinta copyright No, rippers Internet sida daadkii isticmaasho qaab
• Si fudud loogu badalo qaab kale sida MKV, FLV iyo AVI
• files MP4 siiyaan tayada fiican video ee size xadidan oo badbaadin meel xogta lagu kaydiyo qalabka
• MP4 waxaa doorashooyinka ugu wanaagsan ee hoorto maxaa yeelay waxa ay natiijadiisa ugu wanaagsan ee wareejinta xogta video internetka
• files MP4 lagu shiidaa ordi karaan dhamaan ciyaartoyda ugu waaweyn ee warbaahinta iyo darawallada kaarka codka
• track si maldahan u gooni ah waxaa loo isticmaalaa in encode macluumaad hoorto
• kaydiso karaa nooc macluumaad kale oo badan video iyo maqal ah, sida muujiyayaasha shay, muujiyayaasha goobta iyo wax u janjeedha dhismayaasha kale file lagu daro qaababka MPEG
Qasaarooyinka The MPEG 4-il file ma taageeri sifooyinka soo socda ee files MP4:
• kuwan raadkaygay External
• Goosimo Movie ('moof' ama sanduuqyada 'mfra') iyo 'moof' waxaa lagu taageeray in Windows 8.
• bandhigyo huleeshay
• MPEG-4 source file aamusnaan iska dhega kuwan raadkaygay maldahan
• Raadinta by SMPTE code mar
• Tifaftirayaasha ('cmov') atamka. • Faa'iida kaliya ee qaab file MP4 waa ka tafatirka iyo samaynta filim aragti sababtoo ah files MP4 ma fududa in la saxaa ama update.
U isticmaala in ay MPEG-4 waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo warbaahinta, is-dhexgal iyo bay'ada la sheekaysanayo. Habka ugu MPEG-4 ayaa lagu dhisay, oo u ogolaanaya in la isticmaalo deeganada telefishanka iyo Web, ma ahan oo keliya in hab wareegsan laakiin sidoo kale fududeeyaa is-dhexgalka ee content ka imaanaya labada channels in goobta la mid ah multimedia. Its dhibcood xoog waxaa laga dhaxlaa guul MPEG-1 -2 iyo heerarka (.Wadashaqayntaas baahin fasal iyo doorashada on-line / off-line isticmaalka) iyo VRML (awood u leeyahay inuu abuuro content isticmaalaya tilmaanta goobta a). Ratio u dhexeeya tayada MP4 video iyo size (ratio riixo ah) MP4 noqon file ugu caamsan ee multimedia. Dhufto ee mobile Dhowr, kombiyuutarada iyo qalabka Xararad isticmaalaan qaab file MP4 sidii ay qaab file default. Telefoonada Smart, iPad iyo murriyado isticmaalaan balaadhan oo ah qaabka file MP4 si ay u ciyaari files audio iyo video. Dadka jecel si toos ah iyo ka kaaftoomi-free akhriska iyo qoraalka ee video files ay, mar walba preffer isticmaalaya mp4. Ahaanshaha qaabka video caadiga ah, qaab file MP4 waxaa loo isticmaalaa ku dhawaad ​​meel kasta.
Related links 1. Taariikhda Mpeg
2. MPEG4 vs MP4: Waa maxay farqiga u dhexeeya MP4 iyo MPEG4? 1. MP4-Leaks: Waa maxay MP4, Taariikhda, Features iyo Isticmaalka ee MP4
2. Qaabka File MP4
Qeybta 2: Sida loo Download iyo Play MP4 iyo MPEG4?
MP4 iyo MPEG4 jira laba qaabab badanaa loo isticmaalaa video files hadhay oo la mid ah oo kala duwan. Labada qaabab file kuwani waa diyaar ahaadaan si loogu free internet ka download, laakiin waxaad u baahan tahay nooc ka mid ah xirmada software dibadda si ay u soo bixi. Sidaas darteed haddii aad ku heynaa inaan u xirmo la mid ah software kaa caawin karaa in dhacdadaas oo kale, ka dibna Wondershare AllMyTube waa xalka ugu fiican ee aad u!
Sida loo soo bixi MP4 iyo MPEG4 isticmaalaya Wondershare AllMyTube?
Haddii aad indhaha ku heynaa in degsado MP4 iyo MPEG4 video files isticmaalaya Wondershare AllMyTube, markaas fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 2 Raadi aad file MP4 ama MPEG4 inaad kala soo baxdo
Kadib markii ay Wondershare AllMyTube xirmo software-ka, tallaabada xigta waa in la bilaabo raadinaya file MP4 ama MPEG4 in aad rabto in aad kala soo bixi ka. Waxaad isticmaali kartaa browser kasta oo internet ah ee raadinaya jecel videos aad. Waxaa jira dhowr websites sida YouTube, Dailymotion iwm ka halkaas oo aad ka heli kartaa ugu fiican MP4 tayada iyo MPEG4 files.
Marka aad dhamaysato habka download, file ka soo dejisan waxaa laga heli karaa "uga dhammaatay" qaybta ka meesha aad u bedeli karaan video uu ku noqon karo qaab kale oo ka duwan aad rabto. Tusaale ahaan, waxaad kala soo bixi video MP4 ah oo aad dooran kartaa in aad loogu badalo video MP4 ay u noqon MPEG4 adigoo riixaya "Beddelaan" button, ka dibna waxay doortaa qaab ah in ay "MPEG4".
Talaabada 5 Play faylka MPEG4 bixi
> Resource > MP4 > MPEG4 vs MP4, Faraqa u dhexeeya MPEG4 iyo MP4